Ukuze banciphise isikhathi umsebenzi wokwakha, ngakolunye uhlangothi luthuthukisa izinga yabo, kudingeka isakhiwo mixer. Labo kwadingeka ukuba sihlanganise particulate izinto ngamanzi bese uhlanganise nabo kuze mass homogeneous, uzoqaphela ukuthi idivaysi efanayo kagesi ukhululekile.
Zikhona ongakhetha ahlukahlukene ekwakheni labathaki bamafutha anezici ngabanye. Khetha ithuluzi kufanele ikhumbula ivolumu kanye nohlobo lomsebenzi esizayo. Ngakho, ukuqaliswa ukulungiswa yezimonyo kufanele ngokuyisisekelo sisebenze glues futhi varnishes. Kulokhu kwanele ukuthola mixer ukwakha umthamo ephansi.
Njengoba kubalulekile torque engu okusezingeni eliphezulu nesivinini injini, insimbi yokwenza umsebenzi okunjalo kuyoba okwanele ukuba ngesivinini ezimbili. Uma kukhona ukwakhiwa emikhulu futhi kudingeka sisebenze esiningi uquqaba viscous, ukwakhiwa akudingeki mixer kokuba umthamo ngaphezu eyodwa kilowatt.
Ngesikhathi kwakhiwa isebenza bevame ukusebenzelana fillers ahlukahlukene: itshe luthuli, amatshe, amancane isitini impi. Ukuze ukuxuba lezi zingxenye ukuthola into eyohlobo, ukwakhiwa mixer liyadingeka kokuba ne-torque eliphezulu.
Uma ukuthenga ithuluzi kufanele sinake izinhlobo zomsebenzi futhi yinkathi idivayisi izosetshenziselwa. Phakathi eside umsebenzi professional kanye operation okuqhubekayo kuyadingeka ukukhetha labathaki bamafutha uphawu wokwakha, intengo ephakeme ngokwanele. Ngokwesibonelo, kahle kungase kutholakale amathuluzi professional abaholi yokukhiqiza kagesi - izinkampani Makita (Makita) kanye Bosch (Bosch).
Kunzima ukusebenzisa kudivayisi inhloso yazo ngaphandle kobukhona Imibhobho esemzimbeni ekhethekile. Ngu abalithandayo kufanele wasondela ngokucophelela. Uma kudingeka ukuxuba izixazululo esindayo futhi viscous kabani Ukwakheka luhlala phansi isidingo esitsheni ukusebenzisa emasakeni okuzokwenza siphakamise izidakamizwa phezulu. Uma usebenza nge esilula iwukuba ugweme ezingadingekile kudivayisi wachela, kunalokho, kufanele ukucasula ingxube phansi.
Ngokuvamile, ubukhulu esiphezulu umlomo wombhobho ezengeziwe ifinyelela 16 amasentimitha, futhi kuncike umthamo we ingxube enyakaza. Ubude anezele kukho konke ejwayelekile futhi cm 60. Abanye abakhiqizi ukukhiqiza isandiso elikuvumela ukuba uhlanganise izinto emathangini ezijulile amalitha afinyelela ku anamakhulu mabini.
Kwezinye izimo, zuza labathaki bamafutha afanele ukwakhiwa e version double. Elinye ithuluzi unamandla kakhulu, omunye - ezingatheli. umsebenzi ngokuvamile enza imisebenzi eminingi kudingeka onge amandla abo, isikhathi, nokwehlisa bafake ithuluzi, kuyafaneleka ukusabalalisa umthwalo kumadivayisi amaningi. Ngezinye izikhathi okunengqondo esikhundleni mixer ezibizayo ukuthenga ezimbili eshibhile, kodwa kokuba umthamo eyanele nokwethembeka. Namanje njalo mnandi ukuba ku ithuluzi esandleni anemisila nemisebenzi ehlukahlukene.
Reductant Intambo: Umhlahlandlela kanye nokubuyekeza
Amathikithi aphansi e-air. Inqubo esheshayo yokuthenga amathikithi eshibhile
Umuthi 'Karipazim ". Electrophoresis - kuyini?
Iqembu - i association of abantu
Mishel Montinyak: uhlelo ugesi
Pyracantha: zokutshala nokunakekela, zokuzala ikakhulukazi
Imimese Homemade njalo iyinto enkulu
Palm Beach (eKrethe, Greece). Palm Beach Ihhotela Stalis 3 * - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Indlela tie ifindo. amakhono awusizo